GNOME 3.14: Isu tinoongorora desktop inoenderera mberi | Kubva kuLinux
GNOME 3.14: Isu tinoongorora desktop inoramba ichienderera mberi
Sezvo isu tatoziva ave akasunungurwa GNOME 3.14, Desktop Nharaunda iyo isingade chero mharidzo uye izvo zvishoma nezvishoma (sezvazvakaitika ne KDE 4.0) yanga ichibuda mugomba mairi nezvakabuda. GNOME Shell.
Mune ino Ongororo ini ndichaenda kuburitsa maonero angu pachedu maererano neshanduro iyi GNOME kuyedza kusasarura sezvinobvira.
1 GNOME 3.14 Ongororo: Tora iyo Bvunzo Yemufananidzo
2 GNOME 3.14 Ongororo: General Dhata
3 GNOME 3.14 Ongororo: Chitarisiko uye Kuita Kwemunhu
4 GNOME 3.14 Ongororo: Kushandisa
5 GNOME 3.14 Ongororo: Zvishandiso
GNOME 3.14 Ongororo: Tora iyo Bvunzo Yemufananidzo
Kuti ndiite Ongororo iyi ini ndakashandisa bvunzo mufananidzo uyo vakomana kuGNOME vakaita kuti iwanikwe kune wese munhu, iyo inorema kupfuura 1GB chete.
Dhawunirodha GNOME 3.14
Ini ndinoisa iwo mufananidzo padanda re USB ndichishandisa rairo:
Ehe, isu tinofanirwa kutsiva sdb neyuniti inoenderana neyedu USB memory (iyo isingafanirwe kuiswa).
GNOME 3.14 Ongororo: General Dhata
Ichi chifananidzo chekuyedza patinotanga chinotanga Wizard inonakidza kwazvo ichatibvumidza kugadzirisa mitauro yedu, veko, maakaunzi edu ari kure uye mushandisi wedu Ngatione iyo mifananidzo:
Kutanga tinosarudza mutauro wedu:
Iye zvino isu tinosarudza yedu keyboard dhizaini. Kana isiri iyo yeayo anoonekwa pachiratidziri, tinya pamatanho matatu akatwasuka uye voila:
Tinogona kushandisa maakaundi edu pamhepo. Panguva ino ndinofanira kutaura kuti vakawedzerwa nemazvo, asi mukuyedza iso zvakandipa kukanganisa kana ndapinda musangano, ndichiti tenzi kiyi yakanga yachinja uye haisisiri iyo yatakanga tasimbisa.
Zvino kunouya chikamu chemushandisi wedu:
Kutanga kwesangano remubatanidzwa kunonakidza, kunyange hazvo zvichizodikanwa kuti uone kuti rudzii rwedomain rwunoshanda rwuchipesana.
Uye zvese zvakagadzirira 😉
Kana ini ndainyanya kufarira chimwe chinhu kana isu tasvika pa desktop, ndiyo yekutanga nhungamiro kuGNOME 3.14, kwatinogona kuona matatu mavhidhiyo anotidzidzisa akasiyana maitiro ekushandisa iyo desktop, uyezve mamwe maratidziro kune isingabvumirwe bhuku. Nongedzera kuboka reGNOME izvo.
GNOME 3.14 Ongororo: Chitarisiko uye Kuita Kwemunhu
GNOME y OS X ivo vari kuteedzana, zve izvo handina mubvunzo. Chero ani akamboshandisa OS X mushanduro dzazvino uno achaziva zvandiri kureva. Chokwadi, zvimwe zvinhu zvinoshanduka uye chokwadi chinotaurirwa, ndinonyatsoda maitiro GNOME anotaridzika mune zvese.
Pane zvimwe zvirevo zvandinofunga zvinofanirwa kuvandudzwa, semuenzaniso, kune maapplication anotakudza netiyeki theme uye mamwe (seMifananidzo) ane rima tema. Ivo vaviri vanotaridzika kunge vakanaka, asi ini ndinofunga zvakazara ruvara rwakasimba rungave rwuri nani pane zvese.
Imwe tsananguro ndeyekuti ichiri kucherechedzwa kuti mamwe manyorerwo akagadzirirwa patinenge takagunzva, asi mamwe haana. Unoziva sei? Zviri nyore, zvinoshandiswa zvakagadzirirwa «iyo kubata»Ndeavo vanovanza zvavanoda menyu mune bhatani rimwe padhuze nebha remusoro. Vamwe vanoda chiteshi, havana sarudzo iyoyo. Zvakare, kugadzirirwa matekinoroji ekubata, mamwe mabhatani kana mabhawa anoparadza nzvimbo yakawanda nekuda kwehukuru hwayo.
Dambudziko guru neizvi nderekuti GNOME inosimbirira kusaisa chishandiso senge Zvishandiso zveGNOME Tweak nekutadza kugadzirisa mabhatani ewindo, mavara, nezvimwe.
Semuenzaniso, chimwe chinhu chandinogara ndichichinja pamatafura angu ndiyo default font. Zvimwe zvikumbiro zvinotendera kuti zviitwe nemaoko, asi isu hatigone kuzviitira iyo sisitimu yese.
Asi ndichiregeredza izvi zvese, ndinofunga mhedzisiro yekupedzisira yakanaka chaizvo uye muchikamu chiri pane Chitarisiko iwe unowana vhoti yakanaka. Iyo tafura inoyevedza uye iri pasi, mhedzisiro uye shanduko dzakatsetseka, asi zvinosuwisa kuti inorasikirwa nechikamu Kuita somunhu. Ndakataura here kuti iyo yekuvhara skrini yakanaka?
Iwe unofanirwa kutsvedza negonzo (kana zvigunwe) kumusoro kuti uzarure uye upinde zita rekushandisa nephasiwedi 😉
GNOME 3.14 Ongororo: Kushandisa
Zvinonyadzisa kuti handina kuwana mukana wekuyedza GNOME 3.14 pane chekubata, sezvo chingave nepfungwa irinani yekuti mashandiro acho anoshanda sei.Zvisinei, kuti uwane zvakanakisa kubva muiyi Desktop Nharaunda zvinokurudzirwa kudzidza mashoma mapfupi ekhibhodi, ayo anoratidzwa mukubatsira.
Kana tangoziva keyboard, basa racho rinenge rakanyatsogadzikana neGNOME. Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive iro basa rakaitwa muUsability / Yekuwanika chikamu uko kune zvakawanda sarudzo dzevanhu vakaremara neimwe nzira kana imwe.
GNOME 3.14 Ongororo: Zvishandiso
Tinouya kune chikamu chinonakidza chaizvo. GNOME 3.14 inosanganisira zvakanaka kwazvo kunyorera zvese mukugadzira uye mashandiro. Muenzaniso wekutanga ndeyekushandisa kwemamiriro ekunze, yakapusa, yakanaka uye inopa ruzivo rwakaringana kana zvirinani zvinodiwa.
Chimwe chishandiso chandaida chaizvo yaive Mepu, nekuti inotakura nekukurumidza uye inofamba mushe.
Kutarisa paWebhu (Epiphany) uye kutarisa paSafari zvakafanana (kana zvinopesana). Kunyangwe iyo bhurawuza yakavandudza maererano nedesheni, ndicho chete chishandiso chakabatirira pandinovhura inopfuura imwechete tabu.
gedit ichiri yakapusa meseji meseji yekuda kwangu, asi handigoni kuramba kuti inotaridzika inotonhorera uye minimalist senge iyo app Notes.
Imwe inotonhorera, inotonhorera, makuru maapplication, , zviri pachena Mabhokisi (Mabhokisi), ayo anotibvumidza isu kugadzira edu chaiwo michina zviri nyore kwazvo:
Zvakanaka, kazhinji, zvinganditorere nguva yakareba kuti nditaure zvakadzama nezve ese maGNOME 3.14 kunyorera, saka ndinokukoka kuti uedze ivo vekutanga-ruoko kuti uwane muyero uri nani, wekutanga ruoko.Muenzaniso wavo mumhanzi y Video, iyo yakarerutswa yakawanda uye inotaridzika zvikuru.
Ichi chinogara chiri chikamu chakaomarara, sezvo zvinoenderana ne Hardware yemunhu wega wega. Mumushini chaiwo kushandiswa kwe RAM uye processor yaigara ichingokwirira zvishoma kupfuura chaiko kubva mundangariro ye USB.
Tichifunga izvozvo, ndinofunga kuti kana yaiswa paPC kutanga kushandiswa kunofanira kunge kuri pasi pe500MB ye RAM. Kazhinji, GNOME 3.14 inoshanda mushe kana isu tine maficha akanaka, kunyangwe sezvandambotaura pamusoro, zvimwe zvinoshandiswa seWebhu zvakakanda system yangu zvishoma.
Ini handina kukwanisa kusvika pamhedzisiro chaiyo kusvikira ndanga ndichishandisa GNOME 3.14 kweanenge mavhiki mashoma pakombuta yangu, saka ndichaimirira kuti ipinde yakagadzika Archlinux repositories. Asi parizvino ndinogona kusiya zvandaona nemufananidzo uyu wekuyedza.
Zviri nyore kuti udzidze mapfupi nekuti sekuziva kwako, muGNOME hatina runyorwa rwemabasa mupaneru nekutadza. Uyu ndiwo musoro wenyaya wakakurukurwa ad nauseam, uye nhasi, kunyangwe vazhinji vashandisi vakasununguka nedesktop iri, ndinofunga ichiri chokwadi kuti yakanyanya kutarisana nenzvimbo iyo GNOME isinganyatso kupenya, ini Ndinoreva zvekubata zvishandiso.
Iwo mashandisirwo akavandudza zvinooneka, asi mamwe akareruka. Nautilus Inonzwa izere nemabasa uye kunyangwe iko kuri nyore kwezvirongwa senge Mabhokisi, Handifunge kuti zvakanaka kubvisa sarudzo kuruboshwe uye kurudyi. Ichi chichava chigaro chisina kunaka chaizvo iko kudiki maitiro atinowana muGNOME, chimwe chinhu chinoonekwa patinochinjika kune mamwe maDesktop Enharaunda.
Asi kune rimwe divi ini ndinofarira kutaridzika (OSX) kweGNOME 3.14, uye nekuvandudzwa kwayo zvakajairika, saka fungidziro yangu inotevera:
[5 kwe5] Chitarisiko [/ 5 che5] [4 kubva 5] Usability [/ 4 kubva 5] [3 pa5] Performance [/ 3 ye5] [4 kubva 5] Kurerukirwa kwevanotanga [/ 4 kwe5] [3 of 5] Kuita [/ 3 kwe5] [4 kubva 5] Kuonga Kwega [/ 4 kwe5] [4points] [/ 4points]
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GNOME 3.14: Isu tinoongorora desktop inoramba ichienderera mberi
Uye chii chakaiswa, sedistro? Kazhinji nharaunda dzinoiswa pane mamwe ma distros senge debian, ubuntu, arch nemapakeji, asi kwete ne .iso
Izvo hazviise sekuziva kwangu, kungo kuyedza. Zviripachena inomhanya pane distro (rpm, ini handizive kana ichave Fedora kana OpenSUSE).
paka / etc / redhat-release
Ini ndanga ndakatarisa / etc / issue, Debian 😛
Joinha -a ???
Ndicho chinhu chekutanga chandakaita uye chinodzokera kuGNOME se distro 😛
vese vapenyu promo cd yegnome 3 inomhanya pane fedora.
Gnome, nguva dzese painowoneka mumawindo 8, gnome inorema uye inoita kurembedza iyo system, haina kubvumidza iwe kugadzirisa chero chinhu.
Pindura ku robet
Ndine Sabayon ine gnome 3, ndinoshandura sei mvumo yemushandisi?
Shamwari, mubvunzo wako hauna chekuita nenyaya iyi. Kuti uite izvi unogona kuenda kumusangano wedu kana kutsvaga iyo blog yezvinyorwa zvine chekuita nefaira uye folda mvumo .. 😉
Mhoro. Ini ndaida kungobvunza. Iyi distro… chii icho? chii chakavakirwa?
Inogona kuiswa ????
Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru nechinyorwa.
mmm zvakanaka handina kuwana chero nzira yekuisa .. kunze kwekunge ndaita iyo dd yeyeuchidzo kune yakaoma dhisiki rePC uye unditende, handidi kuzviisa panjodzi hahaha. Ndatenda
Great post. Ongororo yakanaka kwazvo.
Kune avo vanoteerera kune izvo zvinyorwa ... scoop yakaburitswa. Iwe unofanirwa kuve wakanyanya kuchenjera, elav! 🙂
Shhh .. chinyararire icho chakavanzika chehurumende hahahaha ..
Ndinofungidzira iwe unoreva kuti isu tatoziva kwaanogara ...
Juaz! Hazvisizvo .. 😛
Ehh… kwete chaizvo.
bvunza kubva ku linux: O
Pindura kune 2d
Mashoko acho achabviswa muna 3, 2, 1 ...
ari [/ 5of5]?
Ndanga ndiine Gnome 3.14 pane yangu Antergos kwemazuva akati wandei uye kunyatso kutsetseka pamwe nekutsetseka uye kwakabudirira shanduko. Ndinoifarira.
Kunze kwezvirongwa zvakati zvisingashande kwandiri mushanduro iyi, uye zvimwe zvekuwedzera, izvo zviri kutotanga kugadzirisa zve 3.14, zvimwe zvese zvakanaka.
Kubatanidza kukuru, GTK 3.14 yakanaka kuita hasha, Adwaita anoiseta.
Gnome 3.14, ini ndinogona kungokuudza iwe fap fap fap ...
Mike J. Karels akadaro
Iwe unosarudza fap, fap, fap yeAntergos uye kwete yeGNOME 3.14: trollface:
Pindura kuna Mike J. Karels
Chinyorwa chinonakidza kucherechedza ndechekuti zvakare zvinokwanisika kuti ubvise iyo yekukiya skrini nekungodzvanya kupinda panzvimbo yekutsvedza skrini
Pindura kune le_zurdo
Ongororo yakanaka, ndinofara kuziva kuti Gnome iri kuvandudza chinhu choga chandisingade ndechekuti nzvimbo yakawanda yapambadzwa.
Nenzira, handizive kana paine anoziva ... Gnome inogona kushandiswa pamushini une Windows 8-8.1 uye inobata?
Hongu, inogona, yakagadzirirwa izvo chaizvo.
Zviripachena uchafanirwa kuona kana iyo Gnu / Linux kugovera iwe unayo ine anodiwa madhiraivha ekuziva iyo Hardware yemuchina wako ne w8, asi izvo hazvitsamire paGnome.
Gnome, pachayo, ine zvese zvekushanda pane chero yekubata skrini, saka usazvidya moyo nezve izvo, iwe uchafanirwa chete kuona kana usiri kupotsa mutyairi kana chimwe chinhu mune iyo distro yaunayo.
sev akanaka anokuvadza main menyu tevera piritsi
Zvingave zvakanaka kana vakapa zvese zvingasarudzwa: uyo anoda "tocuh" interface uye neuyo anoda echinyakare desktop.
Asi, nepo kune zvimwe zvinhu zvinoshanda zvechinyakare interface, zvizhinji zvacho zvinhu zvinongonzwisisika nekubata skrini.
Menyu ndechimwe chezvinhu izvi, pamusoro apa haugone kuona izere zita rezvikumbiro, haugone kusefa nechikamu kana kunyangwe bharumu rinokuudza zita rizere rekushandisa
Zvakanaka, zvinotaridzika zvakanaka kwazvo (tsime, kwete zvakanyanya sekutarisa kwazvinoita muAntergos 😛). Chaindifadza aive Mabhokisi, ndinoda kuyedza isos ye android-x86 yandakatsigira. Imwe yacho, ndinoda kuona chimwe chinhu chakafanana neMepu asi muCinnamon, kwenguva iyo yandagutsikana neXD yemamiriro ekunze desklet. Pamwe pandinosvika pakufinhwa neCinnamon ndichaedza iyi Gnome Shell.
Ongororo yakanaka 🙂
Mubvunzo shamwari yangu: Chirongwa chemamepu, chinoshandisa injini ipi kumamepu? Googlemaps? openstreetmap?
Ndinovimba unokwanisa kundipindura, yakanakisa chinyorwa nenzira.
OSM (Open Street Mepu) .. 😉
Maitiro ekuisa gnome 3.14 muLinuxMint? Nekuti chokwadi ndechekuti ini handikwanise kuzviita, zvinoita sekunge ndine kusawirirana nemamwe mapakeji. Zvinonyadzisa nekuti gnome muArch inomhanya chaizvo nekukurumidza uye nekukurumidza. sei kunditungamira.
Ariel S akadaro
Ini ndaigara ndiri Gnome fanatic, asi mwedzi yakati wandei yapfuura, yakareba mwedzi, ndakaedza KDE, ini ndakanga ndamboiyedza kanoverengeka zvisati zvamboita kuti ndigutsikane, asi yakakwanisa kundikurudzira uye zvaive nekuda kwekushomeka kuita GNOME3 inotakura, ndicho chibvumirano chandakaguma ndamusiya, uye ainyanyisa kuva munhu anonyanyisa.
Ini ndinoramba ndichiverenga shanduko dzake kuti ndione kana ndikazombomupa mumwe mukana.
Pindura kuna Ariel S
oscar meza akadaro
Great GNOME, ndakamboishandisa, asi sezvo Slackware yakamira kuisanganisira ini ndakarega kuishandisa, ndinotya nehuwandu hwezvinhu zvainoshandisa, yave kutosvika KDE.
Pindura kuna Oscar Meza
gadziridza ubuntu gnome 3.13 kune gnome 3.14 uye ini ndinodzima iyo password, ikozvino gara mune zvematongerwo enyika chii chandingaite kugadzirisa nyaya yacho. Ndatenda..
Iwe unofanirwa kuve wakapusa kwazvo kuda GNOME 3 uyezve zvakanyanya kutenderera uchiti. Uye zvakafanana neMacs uye yavo OS X. Kunyangwe Linux Torvalds pachake akataura kuti "gnome" marara.
Ngatitarisei kana iwe ukaona kamwechete kuti nyore uye mashandisiro vapikisi.
Fack iwe, GNOME 3 !!!!
Iwe unofanirwa kunge wakapusa chaizvo kuda GNOME 3 uye kunyangwe zvakadaro kuti utenderere uchizvitaura. Uye zvakafanana zvinoenda kune OS X. Kunyangwe Linus Torvalds iye pachake akataura kuti gnome 3 marara.
Ngatione kana iwe uchinge waziva kamwe kuti kupfava uye kushandisika vari vakasimba vavengi.
Ini ndaisa MATE uye zvinofamba mushe. Handifarire kuti zvachinja mamwe mafomu evamwe ayo akaenzana asi akaderera (gedit yepeni, dolphin yebhokisi, nezvimwewo, asi kunze kwaizvozvo, inguva bhirioni inosarudzika kukanda 3 shit.
Android Studio (kana ADT) mu KDE isina kufa mukuyedza
Software Rusununguko Zuva - 2014